WSZ Series Inter-okupholisa ophezulu-viscosity Horizontal Bead Mill - China Changzhou longxin Imitshini
WSJ Series Horizontal Inter-okupholisa Function uzaliseke ...
Supply Amandla: 100 Pieces Inyanga nganye
Lo matshini ilungiselelwe ngokukodwa pre-kwiintsali nokusasazeka omhle izinto eziphakamileyo viscosity (lisisiqalo-inki oyile). Ingasetyenziswa zibangele kwaye ndawonye lokusila mqengqeleki ezintathu ngokusebenzisa ngendibaniso kwakunye umgca imveliso oluzenzekelayo ngokupheleleyo. Lo izixhobo efanelekileyo ukwenzela ukuvelisa lisisiqalo ioli inki kunye nezinto eliphezulu viscosity.
● PLC isetyenziselwa ulawulo, umzobo nelo kunye touch screen ziyafumaneka (ozikhethelayo).
● egumbini wokugaya Tapered kunye trapezoid plane ukuba yenzelwe ukuba usile izinto eziphakamileyo viscosity. Isixhobo oluphambili inter-okupholisa kakuhle ngokwaneleyo yokususa ubushushu eyenziwe ngexesha ophezulu-viscosity yokugaya egumbini lokusila.
● uphawu Mechanical kunye nemilebe uphawu zonke elizweni evela eJamani, ezinceda ukwambula nut nzima ukuba izinto ithande ukuba avuze egumbini kugaywe ophezulu-viscosity lokusila msebenzi.
● A lokucoca magnetic ukubhobhoza kazibuthe 8000 GAUSS, leyo akubikho ubumdaka basemzini-metal equlethwe intlama ukuba ukusilwa, iqinisekisa ubunyulu lwemveliso kwakunye nokhuseleko nezixhobo yenkqubo elandelayo.
● Volume variable uhlobo piston lokusila egumbini utshintsha mninzi amandla kunye noxinzelelo umphanda ukuba bafikelele kwiintsali engcono kunye neziphumo begaya.
Previous: WSK Series High-viscosity abahle okuzenza Bead Mill
Next: WHD Series abahle Bead Mill
Anti-Explosion nkqo Super Bead Mill
Bead Mill Ukusila Machine
Bead Mill sakhi
yodongwe Bead Mill
Yodongwe Horizontal Bead Mill
Flexible umfana Bead Mill
Function Full Horizontal Bead Mill
High Umgangatho Bead Mill Machine
Viscosity High nkqo Bead Mill
Tye Amaso Mill
tye Esikhulu Flow Bead Mill
ezinkulu Flow Bead Mill
Iileyibheli SC Bead Mill
Nkqo High Flow Bead Mill
WSV Series nkqo Inter-okupholisa Bipyramid Bea ...